MUUQAAL: Qaabkii Xilka looga Qaaday Gudoomiye Dhoobo iyo Jawaab Kulul oo uu bixiyey | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Qaabkii Xilka looga Qaaday Gudoomiye Dhoobo iyo Jawaab Kulul oo uu bixiyey
Nov 7, 2019 - 5 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa sheegay in aysan “sharci ahayn” codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay.
“Waxaanu leenahay nidhaam iyo hannaan; waxaanu leenahay shuruuc uu ugu sarreeyo dastuurka. Haddaanu nahay Baarlamaanka, waxaan leenahay xeer-hoosaadka golaha. haddaanu labadaa midna waafaqsanayn, waa xaaraan, waxna kama jiraan, mana ansaxayo”, ayuu yidhi Dhoobo.
“Waxaa na kala saaraya in uu xaq yahay ama in uu xaraan yahay, waxa iigu qoran dastuurka iyo xeer hoosaadka, qaabka aan xilka ku waayi karo, Anigu sifo sharci ah baan ku imid, sifo sharci ahna waan ku tagayaa”, ayuu sheegay Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo ku dooday in xildhibaannada Culeys la saaray, lacagna loo qeybiyay.
Fadhi ay Xildhibaanada ku yeesheen xarunta Baarlamaanka ayaa waxaa soo xaadiray 53 Xildhibaan, iyadoo uu shir guddoominayay Guddoomiye kuxigeenka 1aad.
49 Xildhibaan ayaa ansixiyay u codeeyay mooshinka xil ka qaadista, halka 4 Xildhibaan ay ka aamustay, iyadoo tani ka dhigan tahay in sidaas xilka looga xayuubiyay Guddoomiyihii Baarlamaanka Cabdixakiin Dhoobo Daareed.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA XILKA KA QAADISTA
Imaan ma jiro Aakhro na waa istaaqfurallah mar haddii lacag la sheego.
Allow Ummaddi diinu lacag bay noqotay. Kitaabkii bidixdaa laga tuuray oo dhaartii waa la illoobay dalkii ka shaqeyso, hawshaqayn buu noqday, uurkii iyo afkii waa is diiday, gacantii baa ordaysa, ii dhiib aan ku dhuftee bay arrinti iyo mustaqbalkii Soomaaliya ku soo ururtay. Kii Alle xasuustana waa kaas walaga tuurayaa meeshaya si indho la’aan ah.
Aniga ninkaan Maxamed Axmed DHOOBO waa ila gardaranyahay. °Dadka inta yar oo fayoow waa ogyihiin inaysan Puntland ahayn Maamul Somali Walaa mid Daarood Walaa mid Harti LAAKIIN uu yahay mid Majeerteen siiba Maxamuud Saleebaan HADDABA ciddi damacda inay la qaybsato WAA ila Qaldantahay. WBT
War ninkan magaca iga bililiqaystay muxuu ahaa?war illeen tanoo kale.
Adeer dhulooska odayadooda garoowe banbarada KUWADA xiran iyo waxa baarlamaanka Mj maxamuud saleebaan IYO KUWA WARSAN GELI EE CALOOSHA KA WADA BUKA EE WAXAAS KUDHACAYAAN HA LA WAYDIIYO WAXA KU KALIFAY INAY HOOGAAS IYO BALANBALKAA IYO CEEBTAAS MARTI UNOQDAAN SUBXAAN ALAAH WAXAA KUXIGA DOQONKA DIMAHA CAD EE DHULOOS EE GAROOWE MOODAY XUDUN TALEEX CEERI IYO SOOL IYO CAYN ILAAHOOW CEEB ASTUR
ADEER BEESHA DHEXE EE PL NINKII ISKU SOO TAAGA DAADKAA QAADAYA.
Mr:DHOOBO WAA KU DAAYEY WUXUUNA ISKA INDHO TIRAY XAQIIQDA JIRTA EE AH IN PL AY LEEYIHIIN BEESHA DHEXE EE AAN LA WADA LAHAYN.